KDE Plasma 5.19 iri pano, ziva kukosha kwayo kwakanyanya uye nhau | Linux Vakapindwa muropa
Iyo nyowani vhezheni yeakakurumbira desktop desktop yatove pakati pedu KDE Plasma 5.19 mairi ipa nhevedzano yekuvandudza kunonakidza, pamwe nekudzokororwa kwakasiyana siyana kwezvikamu zveiyi desktop nharaunda.
Kune avo vachiri kuziva nezve KDE Plasma, vanofanira kuziva izvozvo igobhu rakavakwa uchishandisa iyo KDE Mireza 5 uye Qt 5 raibhurari uchishandisa OpenGL / OpenGL, mukuwedzera pakuve yakasarudzika sarudzo nekuda kwesarudzo huru dzekugadzirisa dzinopihwa nharaunda uyezve nekugadzirwa kwakanakisa.
1 Chii chitsva mu KDE Plasma 5.19
1.1 Nzira yekuwana sei KDE Plasma 5.19?
Chii chitsva mu KDE Plasma 5.19
Mune iyi vhezheni nyowani yezvakatipoteredza, tinogona kuwana izvo iyo interface yekushandisa yakagadzirwazve kuona ruzivo nezve iyo system, umo kugona kuona ruzivo nezve graphic michina kwakawedzerwa.
MuKWin nzira nyowani yakashandiswa clipping iyo inogadzirisa iro dambudziko rekutsvedza mune akawanda maficha.
Ndichiri kumhanya wayland, zvakare Tsigiro inopihwa kutenderera kwescreen pamahwendefa uye malaptop uye maTransformer uye nekugadziriswa kwemavara eglyphs mumusoro zvinopihwa kuti zvienderane neanoshanda color scheme.
Imwe shanduko iyo inoiswa mune iyi nyowani vhezheni yeKDE Plasma 5.19 iri muna Discover izvo ikozvino ine kurongeka kwakabatana pamwe nezvimwe zvinhu zvePlasma, kurerutswa kubviswa kweFlatpak repository, pamwe nekuratidzira iyo vhezheni yechishandiso icho chinopihwa.
Uyewo, inosimbisa iye basa iro rakaitwa kubatanidza marongerwo uye misoro yeapplets mune system tray, pamwe chete nezviziviso zvinoratidzwa pa desktop, zvakare iyo nyowani seti yemaphoto avatari inowanikwa mune yemusetwa masetingi interface.
Default, nyowani kuyerera mapikicha zvinokurudzirwa, iyo mune yedesktop kumashure kusarudzwa interface, unogona kuona ruzivo nezve munyori wemufananidzo.
Tinogona zvakare kuwana izvo applet chitarisiko chakagadziridzwa kubata iyo midhiya faira kutamba iri mune system tireyi.
Iko kugona kwekuisa nyowani color scheme kuGTK3-based application kwave kuitiswa, uye nyaya nekuratidzira kwakakodzera mavara muGTK2-based application zvagadziriswa.
Izvo zvikamu zvekutarisa default application, online service account, epasi rose keyboard mapfupi, KWin zvinyorwa uye neshure masevhisi akagadzirwazve mu "System Zvirongwa" gadziriso.
Paunenge uchidana iyo configurator module kubva kuKRunner kana kubva kune yekutanga application menyu, iyo yakazara "Sisitimu Yekugadzirisa" application inotangwa nekuvhura iyo yaunoda yekumisikidza chikamu.
Uye izvo peji rekumisikidza rinopihwa mune inodzora odhiyo widget ine inowirirana interface yekuchinjika pakati peanowanikwa mariza macustomer, yakafanana nechitarisiko kune mamwe majeti.
Basa rakaitwa kugadzirisa iko kushandiswa kwemanotsi anonamira.
Iyo pani yakavandudza induction uye kugona kwe auto-epakati majeti.
Mukugadziriswa kwemaparadziro echiratidziro, kuratidzwa kweiyo chikamu chikamu kune yega yega resolution resolution yechisimba inoitwa.
Wakawedzera kugona kugadzirisa kumhanyisa kwemhedzisiro mhedzisiro yedesktop.
Paunenge uchishandisa Wayland yakapihwa kugona kugadzirisa yekumhanyisa kumhanyisa mbeva uye trackpad.
Kugadziriswa kudiki kwakawanda uye kugadzirisa kwakaitwa kune font font interface.
KSysGuard inowedzera rutsigiro rwemasystem ane anopfuura gumi nemaviri CPU macores
Iwo majeti ekuwongorora system parameter akanyorwa zvekare.
Nzira yekuwana sei KDE Plasma 5.19?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » KDE Plasma 5.19 iri pano, ziva kukosha kwayo kwakanyanya uye nhau
CROSSTalk dhata inodonha kunetsekana ko kana… inokanganisa Intel